Ikhekhe lekherothi > Ukudla ngesifo sikashukela
UMsombuluko, Mashi 12, 2018
I-muffin yaseBrazil karoti (ikha de cenoura) ngipheke izikhathi eziningi futhi kamuva nje ngabona ukuthi akusekho iresiphi esizeni. Ngincoma kakhulu ukulungiselela nokunambitha le khekhe elithambile, elinomoya omnandi futhi elimnandi elenzelwe ekhaya. Akukho ukunambitheka kwezaqathe kukhekhe elinjalo, kepha ubukhazikhazi nobumnene buqinisekisiwe!
Izaqathi ukulungiselela leli khekhe zisetshenziselwa okusha: umbala wokubhaka osuqediwe kuncike ekugcwalisweni kombala wezilimo zezimpande. Amafutha emifino kufanele athathwe acolisisiwe, okungukuthi, kunephunga (ngami, i-sunflower). Kuzodingeka amaqanda amakhulu (aphakathi nendawo, thatha ama-5, namancane - ama-6-7). Ngihlala ngengeza i-home baking powder (ungathola iresiphi eningiliziwe lapha).
Isici sokulungiselela inhlama yekhekhe le-isanqante singabizwa ngokuthi indlela yokuxova: zonke izithako zimane zihlanganiswe ku-blender. Ikhekhe elinjalo lingaphekwa hhayi kuphela ngesimo esiyindilinga ngomgodi, kepha kunoma yiliphi elinye (isikwele noma, ngokwesibonelo, elingunxande). Fafaza izimpahla eziphekiwe ezibhakiwe ngoshukela we-icing noma uthele nge-icing ye-chocolate (iresiphi efanelekile ingatholakala lapha).
Ukulungiselela ikhekhe le-carrot elimnandi, sidinga izithako ezilandelayo: ufulawa kakolweni (ngine-Lidska premium), ushukela othosiwe, uwoyela wemifino ocwengekile, amaqanda enkukhu, izaqathe ezintsha, ushukela we-vanilla (ungafaka esikhundleni se-vanilla noma i-vanilla element), i-baking powder nosawoti omncane. Yonke imikhiqizo kumele ibe ngaphansi kwezinga lokushisa lamakamelo.
Phula amaqanda esitsheni se-blender, engeza ushukela obunjiwe, ushukela we-vanilla kanye nengcosana kasawoti.
Sidabula konke kuze kube bushelelezi amasekhondi angama-30 (ungakhohlwa ukuvala isivalo ngokuqinile). Ngemuva kwalokho faka izaqathe ezihlotshisiwe futhi ezisikiwe izingcezu ezincane. Thela uwoyela wemifino onephunga.
Siphinda futhi sigaye yonke into ndawonye kuze kube yilapho izithako ziphenduka isisindo esingenangqondo ngokuphelele.
Kusele ukufaka ufulawa kakolweni engxenyeni yetshezi, okumele kuxutshwe kusengaphambili ne-baking powder bese ubhula ngesihlungo.
Uma kunesidingo, yima i-blender futhi umsize avuse ufulawa uma engafuni ukucwila ezansi futhi axube nesisekelo soketshezi. Umphumela uba uketshezi oluwuketshezi olugeleza kahle, olufana nokhilimu omuncu ophansi noma i-kefir eminyene.
Qiniseka ukuthambisa isitsha sokubhaka ngamafutha zemifino bese uthele inhlama kuso. Ngenye indlela, ungasebenzisa ibhotela elithambile, kepha kuleli cala, fafaza ingaphezulu ngefulawa kakolweni (susa ngokweqile). Le ndlela yokulungisa isidlo sokubhaka ibizwa ngokuthi "ihembe laseFrance."
Sibhaka ikhekhe le-carrot laseBrazil kuhhavini oshaqwe ngaphambi kwama-degree angama-180 imizuzu engaba ngu-50. Ngemuva kwalokho, vala i-ovini bese uvumela ukubhaka kube nomnyango ovaliwe eminye imizuzu eyi-10. Kubalulekile kakhulu ukuqonda ukuthi isikhathi sokubhaka sihluke kakhulu kulokho okukhonjiswe kuresiphi! Akuncike ehovini kuphela (nginegesi, ukufudumeza okuphansi, ngaphandle kokushiswa, futhi ungahle ube nayo ngogesi), kodwa futhi nesimo sayo, kanye nosayizi wesitsha sokubhaka.
Sikhipha ikhekhe le-carrot eliqediwe kusuka kwisikhunta futhi silidedele liphole ngokuphelele. Fafaza ngoshukela we-icing noma uthele nge-chocolate icing.
Yizame: leli ikhekhe eliyikhaya elinambitheka kakhulu, elimnandi futhi elimnandi elizokunqoba okokuqala. Pheka impilo futhi ujabulele ukudla kwakho, bangane!
Gaya izaqathe ku-blender (noma i-grate).
Hlanganisa uhlanganise izaqathe ngamafutha yemifino, isinamoni, ushukela we-vanilla nosawoti.
Hlanganisa ufulawa, ushukela, amaqanda, i-baking powder ne-slaked kasawoti ku-carrot mass.
Hlanganisa ngokuphelele zonke izithako, uthola inhlama ebunjiwe onsundu-orange.
Hlela inhlama inisikhunta noma ifomu elilodwa bese ubhaka ama-muffins kuhhavini ekushiseni kwama-degrees angama-200 kuze kube yilapho ithenda.
Ama-karoti ama-muffin ngokufakwa kwama-walnuts enhlama kunambitha ikakhulukazi.
Izaqathe kumakhekhe: okumnandi futhi okunempilo!
Ama-muffin anama-karoti abhakwa ngokushesha, ngakho-ke isivuno sezimpande sigcina cishe yonke impahla yaso enenzuzo.
Izaqathi zinothile ku-fiber yokudla, i-beta-carotene - i-proitamin A, ama-amino acid, namavithamini eqembu le-B.
Lesi sithelo se-orange sinayo ikhwalithi eyingqayizivele - ngesikhathi sokwelashwa okushisa yandisa inani lama-antioxidants amahlandla ama-3.
Ngakho-ke, ukudla ama-muffin e-karoti akuyona kuphela okumnandi kakhulu, kodwa futhi kusebenza.
Inhlama, ungangeza izaqathe, oqoshiwe zibe yizicucu ezincane ezondile, ikhekhe elihlanganisiwe ngisho nekherothi, esele ngemuva kokwenza ujusi omusha.
Kukulungele ngokulinganayo ukupheka izimpahla ezinjalo ezibhakiwe kukapheki ohamba kancane, i-microwave nehovini. Njengefomu, iphepha ne-silicone, kanye nezikhunta ze-foil, izinkomishi ze-ceramic neziqukathi ezijwayelekile - insimbi, ubumba, ingilazi kufanelekile.
Ama-muffin anama-izaqathe awafani kuphela ekunambithekeni kwawo obucayi nephunga elicebile, kodwa futhi ngombala ophuzi, umuntu angasho ukuthi kunelanga, ngombala.
Ngasikhathi sinye, cishe akunakwenzeka ukuqagela ukuthi ukwakheka kokuhlolwa kunekhabrothi elusizo kodwa elingathandeki. Ikakhulu uma uyihlikihla ngesigaxa somdiliya esibonakala kwezinye izitsha.
I-Cuisine: Uhlobo lwase-European of dish: i-pastries Indlela yokulungiselela: kuhhavini Izinsiza: 4-5 40 min
izaqathe ezinoshukela - ama-1-2 ama-PC.
amaqanda - ama-2 ama-PC.
uwoyela wemifino (odorless) - 140 ml
ushukela - 75 g
ufulawa kakolweni - 180 g
amagilebhisi angenazithombo - 25 g.
Zihlanze ngamandla kuze kutholakale ingxubevange yemfanelo.
Thela ufulawa ngesihlungo esihle futhi, kanye ne-baking powder, faka inhlama ngokucophelela.
Govuza kuze kube bushelelezi.
Grate izaqathe. Kulokhu, ungasebenzisa zombili i-grater enezimbobo ezincane, nezinkulu. Konke kuncike ekutheni ufuna ukuthi izaqathi zibonakale esivivinyweni noma uzama ukusifaka umaskandi.
Govuza izaqathe ezigayiwe kwinhlama. Ngokuvumelana ngokungaguquguquki, ayisiwugqinsi kakhulu, ngakho-ke kuzoba lula ukwenza.
Hlambulula ngaphambili, bese uthela ngaphezulu kwamanzi abilayo noma cwilisa itiye elimnandi imizuzu engama-8-10. Misa imvinini ethambile bese, ulandela izaqathe, uwafake kwinhlama yekhekhe.
Shingisa. Enhlama yokuthola ukunambitheka okuqine, ungangeza i-vanillin esicongweni sommese.
Sabalalisa inhlama eqediwe ekubumbeni okugcotshwe ngamafutha yemifino, ugcwalise ngamunye wabo ngokungabi ngaphezu kuka-2/3.
Bhaka ama-muffin ngama-degree angama-180 imizuzu engaba ngu-25. Ukulungela ukubheka ngentonga yokhuni.
Isanqante esiphekiwe esiphekwe kanye ne-muffin e-orange
Ikhekhe elula futhi elihlwabusayo lilungiswa ngomzamo omncane.
Izithako zalo zingabekwa ku-multicooker kusihlwa futhi zibeke isikhathi sokupheka ukuze kutholakale ama-khekhe okushisayo amasha ngesidlo sasekuseni.
isanqante - inani 3, usayizi ophakathi, namanzi
i-orange - 1 pc. enkulu, imnandi
ingilazi kafulawa kakolweni
ushukela - ½ tbsp.
ama-walnuts - ama-pcs ayi-10-12.
1.5-2 tbsp ushukela oluyimpuphu
i-baking powder - 1.5 tsp
Gaya izaqathe kanye ne-orange ehlutshiwe ku-blender. Kuzovela amazambane abunjiwe abilayo.
Beat amaqanda noshukela, uthele amazambane ecubuziwe u hlanganise.
Faka ufulawa ne-baking powder, engeza amantongomane bese uxova inhlama.
Uma kuvela ukuthi uketshezi, ungangeza ufulawa omncane.
Gcoba isitsha se-multicooker ngebhotela - imifino enokhilimu noma iphunga, ufafaze ngofulawa omncane bese uthela inhlama.
Bhaka ngemodi efanele cishe ihora. Imvamisa kuma-multicookers kunohlelo “Ukubhaka”.
Fafaza isanqante se-karrot-nati ngoshukela we-orange icing.
Lenten iresiphi kalamula namantongomane
Ikhekhe le-carrot-lemon elinembewu namantongomane alungiswa ngaphandle kwamaqanda, amafutha, futhi ngaphandle kwemikhiqizo yezilwane.
Inephunga le-machungane le-pungent futhi linambitha nge-acidity emnene.
Ngaphakathi, izimpahla ezibhakiwe zimswakama - lokhu kujwayelekile, njengoba izithelo zikhiqiza ujusi omningi.
izaqathe - 2 ama-PC.
i-orange - 1 pc.
ulamula - 1 pc.
ubhanana - 1 pc.
ithanga - 200 g
amantongomane acatshangelwe - ½ tbsp.
imbewu yethanga ehlutshiwe - ½ tbsp.
ingilazi kafulawa noshukela, kungadingeka ufulawa omncane
utshwala obunamandla be-citrus, thayipha uCointreau - 2 tbsp. l
i-baking powder - 2 tsp
Ukupheka igxathu negxathu:
Shaya zonke izithelo, ithanga kanye izaqathe ku-blender kuze kube kucubuziwe. Ngaso leso sikhathi, akudingekile ukukhanda izithelo zezithelo, vele ususe imbewu. Thela utshwala.
Gaya amantongomane nembewu (setha eceleni amanye amantongomane wokufafaza), uthele ngoshukela ocubuziwe bese uphinde ushaye.
Faka ufulawa ne-baking powder kancane.
Bhaka okungcono kuhhavini ku-silicone isikhunta.
Hlobisa ngamantongomane achotshoziwe.
2 izaqathe ezinkulu zemifino
ushizi wekotishi - 200 g
ukhilimu omuncu - 50 g
ibhotela - 150 g
ufulawa - 180-220g
ujusi kanye ne-zest kusuka kulamula ongu-1,
ushukela oluyimpuphu - 5 tbsp. l
okumhlophe okweqanda - 1 pc.
Gaya ushizi wekotishi ngesipuni sokhuni noma nge-spatula enamaqanda, ushukela no-ukhilimu omuncu.
Thela ibhotela elicibilikile, engeza izaqathi egayiwe bese uxuba.
Faka ufulawa bese uxova inhlama.
Ngenkathi imikhiqizo ibhakwa, udinga ukushaya ijusi kalamula nge-zest, ushukela oluyimpuphu neqanda elimhlophe kuze kube bushelelezi. Kuyadingeka ukulungisa ubukhulu be-glaze ngokungeza ushukela we-icing omncane kakhulu, nejusi kalamula kube mnene kakhulu.
I-glaze isetshenziselwa imikhiqizo efudumele futhi ihlanzethwe ngommese oshisayo, obanzi.
izaqathe - ama-3 ama-PC.
ingilazi yenhlanganisela kafulawa kakolweni nofulawa kakolweni (ummbila ngaphezulu)
ushukela - 1,3 tbsp.
Amafutha emifino acwengekile - 2/3 tbsp.
amaqanda - ama-4 ama-PC.
ushukela oluyimpuphu - 4 tbsp. l
okumhlophe okweqanda - ama-2 ama-PC.
i-baking powder -10 g
Izaqathe ze-grate. Cindezela kancane bese uqoqa ujusi ohlukile.
Shaya amaqanda noshukela nosawoti.
Hlanganisa isanqante neqanda leqanda, uthele ku-oyela, uhlanganise, engeza ufulawa ne-baking powder.
Thela isikhunta esisontekile, uwagcwalise ngo-2/3, ubhake.
Lezi muffin zibhakwe kakhulu kuhhavini.
Ukuze usitheke, gaya ushukela oluyimpuphu ngamaprotheni, “umbala” ujusi we-karoti.
Faka isicelo sezinto zokufudumeza ngebhulashi.
Amakhekhe e-Oatmeal PP
Ngokusho kwale ndlela yokupheka, wonke umuntu angakujabulela ukupheka ama-carrot - ama-vegans, ukuzila ukudla, ukunciphisa umzimba kanye nokulandela izimiso zokudla okufanele nokuphila okunempilo.
Ama-oatmeal ne-karoti muffin noju - inketho yokudla yokunciphisa isisindo hhayi kuphela, njengoba okuqukethwe kwabo kwekhalori kungama-180 kcal kuphela!
ikhekhe le-isanqante - 2 tbsp.
apula yashizi - 1 tbsp.
banana - - ama-pcs
uhhafu wenkomishi kafulawa wekolweni
i-oatmeal - ½ tbsp.
ukolweni bran - ¼ st.
uju - 3 tbsp. l
Carrot Chocolate Muffins
Amakhekhe emifino angajwayelekile enothi lika-chocolate azomangaza izivakashi futhi ajabulele ukwenziwa kwekhaya.
beet - 1 pc. omncane
Amaqanda amathathu enkukhu amakhulu
uwoyela yemifino -1 / 2 tbsp.
ushokoledi omnyama nomhlophe - 50 g lilinye
i-vanillin - esicongweni sommese
I-1 tsp negquma lika-baking powder.
I-Banana Carrot Cupcake ne-Ginger ne-Cinnamon
Amakhekhe amakhekhe, amakha kancane, azokhanga kunoma ngubani.
Ilungiselelwe kalula futhi ayibizi.
ikhekhe le-isanqante - 200 g
ubhanana ovuthiwe - 2 ama-PC.
ufulawa - 1 tbsp.
ushukela - 2/3 Ubuciko.
omisiwe - 1/3 tbsp.
Izithelo ezincanyiwe - 1/3 Ubuciko.
ginger grey - 1 tsp
isinamoni - 1 tsp
i-vanillin - kancane
15 g we-baking powder.
Iresiphi elula ye-kefir
Ukupheka ngale ndlela yokupheka kulula kakhulu.
Umphumela uyojabulisa ngisho nompheki we-khekhe ongenalwazi.
Ukugcwaliswa kwembewu ye-poppy kusondele eduze nesithelo nemifino yemifino.
Uma ufisa ungakwenza ngaphandle kokugcwalisa noma ukufaka okunye esikhundleni shlobo - i-curd, i-apula noma nje ucezu lukashokoleti - nayo izoba mnandi.
2 ama-apula amakhulu kanye izaqathi,
ingilazi kashukela, ufulawa omningi
isigamu sendebe ye-kefir ne-semolina
i-poppy - 50 g
ushukela oluyimpuphu - 3 tbsp. l
ama-walnuts noma amanye amantongomane aqothulwe - 3 tbsp. l
i-baking powder - uhhafu wesaka (10 g)
Yenza kube lula:
Thela i-semolina nge-kefir bese ushiya ihora ukuvuvukala.
Thela amanzi abilayo ngaphezulu kwe-poppy isigamu sehora.
Kwi-blender, lungisa isanqante kanye ne-apula puree kusuka kwizithelo ezihlotshisiwe nezamanzi.
Gaya iqanda noshukela, uthele kumazambane abunjiwe.
Hlanganisa amazambane abunjiwe, amaqanda ne-kefir.
Faka ufulawa, i-baking powder bese uxova inhlama.
Cwilisa imbewu ye-poppy, hlanganisa nebhotela elicibilikile, ushukela we-icing namantongomane.
Thela ingxenye yesithathu yenqathe kanye nenhlama ye-apula kubumba, faka i-spoonful yokugcwaliswa kwembewu ye-poppy, ubeke enye ingxenye yesithathu yenhlama. Ingxenye yesithathu yokubumba kufanele ihlale ingenalutho, ngakho-ke umkhiqizo ukhuphuka.
Bhaka amakhekhe amakhekhe ngokugcwaliswa, njengawo wonke amanye - ama-170-180 degrees, ukusuka kumizuzu engama-20 kuya kwengxenye yehora.
Ama-muffin kufanele asuswe ekubumbeni kuphela ngemuva kokupholisa ngokuphelele.
Kungcono ukubayeka bapholile endaweni efanayo abephekwe kuyo - kuphekeni onenhliziyo encane enesembozo esilengisiwe, ku-microwave noma kuhhavini umnyango ovulekile.
Bopha inhlama ngokushesha, ubhake ngokushesha emva kokuchitheka ku-isikhunta, ngaphandle kokufakazela.
Amakhekhe athanda ukushisa okuphezulu.
Ukulungela ukubhaka kuhlolwe ngumdlalo noma inalithi yokugoba ukhuni.
Izithako ze-Carrot Amakhekhe:
Ufulawa we-Wheat / Flour - 200 g
Izaqathi (2 ezincane) - 180 g
Amafutha omnqumo - 140 ml
Ama-rains (ukukhanya (nganginombala omnyama) - 50 g
Ama-Walnuts - 75 g
Iqanda lenkukhu (likhulu, uma lilincane, khona-ke ama-3 ama-PC.) - ama-2 ama-pcs.
Isikhathi Sokupheka: Imizuzu engama-60
Ukuhlinzekwa Ngesiqukathi: 12
Iresiphi "Amakhekhe Amakhekhe":
Faka amantongomane ngommese bese uthosa kancane epanini lokuthosa elomile.
Hlambulula kahle bese ulahla ku-colander ukuze amanzi angilazi kahle.
I-karoti ebunjiwe ku-grater ephakathi, uma inejusi kakhulu, fafaza ujusi owedlulele.
Beat amaqanda noshukela (ngisebenzise ushukela we-demerara ushukela ovela eMistral). Faka uwoyela we-olive, u hlanganise kahle.
Thela ufulawa nge-soda. Kancane kancane engeza ufulawa, faka inhlama efanayo.
Faka izaqathi egayiwe, amantongomane, omisiwe enhlama. Hlanganisa kahle.
Kuhle ukugcoba isikhunta (noma esisodwa esikhulu) ngamafutha noma ukuwashele ngephepha lesikhumba. Gcwalisa amafomu ngo 2/3 bese usabalalisa inhlama ngokulinganayo.
Bhaka kuhhavini osuke usushisa kakade ngamadigri ayi-180. Isikhathi sincike kwifomu: uma elilodwa likhulu, khona-ke imizuzu engama-40-45, uma incane, khona-ke cishe imizuzu engama-30. Ukuzimisela ukubheka ngewashi lezinkuni.
Fafaza ama-muffin aqediwe ngoshukela oluyimpuphu noma uhlobise ngo-ukhilimu ophekiwe.
Ukubhaka kuzoba ngamehlo amancane uma ungeza umxube esikhundleni se-walnuts: ama-hazelnuts, ama-cashews namantongomane.
Izithombe "I-Carrot Amakhekhe" kusuka kuphekwe (5)
Novemba 18, 2018 ylukovska #
Septhemba 9, 2016 matanyan #
Okthoba 25, 2016 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Okthoba 1, 2015 alice pya #
Okthoba 6, 2015 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Septhemba 18, 2015 Yael #
Septhemba 14, 2015 Weevil #
Febhruwari 19, 2015 Bunny Oxe #
NgoFebhuwari 20, 2015 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Okthoba 14, 2014 felix032 #
Okthoba 16, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Novemba 18, 2014 Ukuphula umthetho #
Novemba 18, 2014 felix032 #
Okthoba 8, 2014 Zhmenka AI #
Okthoba 8, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Septhemba 26, 2014 Violl #
Septhemba 27, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Septhemba 26, 2014 Olga Pokusaeva #
Disemba 30, 2014 Evrazhka Lapchataya #
Disemba 30, 2014 Olga Pokusaeva #
Ephreli 17, 2014 Tamusya #
Ephreli 17, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Ephreli 17, 2014 Halynka #
Ephreli 7, 2014
Ephreli 8, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Mashi 26, 2014 veronika1910 #
Mashi 26, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
NgoFebhuwari 21, 2014 ibha #
NgoFebhuwari 21, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Febhruwari 22, 2014 ibha #
NgoFebhuwari 22, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Febhruwari 23, 2014 ibha #
Febhruwari 12, 2014 paciuczok #
Febhruwari 13, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
Febhruwari 11, 2014 okusajingijolo-Kalinka #
Febhruwari 11, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
NgoFebhuwari 9, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
NgoFebhuwari 8, 2014 felix032 #
NgoFebhuwari 8, 2014 AlenkaV # (umbhali weresiphi)
NgoFebhuwari 8, 2014 izichibi #
I-Classic Carrot Cake Recipe
Njengazo zonke izitsha, ikhekhe le-isanqante has a iresiphi yakudala, ngokusho kwalo eyayikade iphekwe okokuqala. Le khekhe inombala we-orange omangalisayo oyinikeza izaqathe. Ingagawulwa nje ibe yizicucu noma igcotshwe ku-grater. Ngisho ikhekhe elisele ngemuva kokwenza ijusi elinempilo lifanelekile.
Izaqathi zithuthukisa umbono.
Ukulungiselela ikhekhe le-carrot ngokuya nge-iresiphi yakudala, sidinga:
izaqathe ezihlanganisiwe - izingilazi ezi-2, ngoba lokhu udinga izaqathe ezinkulu ezi-2
ufulawa we-premium - cishe ama-300 g,
amaqanda enkukhu - ama-2 ama-PC.,
ibhotela - 150 g,
usawoti - 0.5 tsp
isoda - isipuni esingu-1 ngaphandle.
Ukwenza ama-khekhe anambitheke futhi abe nephunga, ungangeza isipuni sikashukela we-vanilla, kanye nesinamoni emhlabathini.